Manazava ny zava-manahiran-tsaina ny sary vongana tsara
Indraindray nisy sary iray mendrika teny an'arivony, an-jatony vitsivitsy, bitsika, ankihibe ary mizara. Ambonin'izany, ireo pikantsary dia nopotehina, nozaraina, novolavola, ary novaina ho an'ny fandrosoana amin'ny fandraharahana. Ny ankamaroan'ny olona dia manala sary tsy nahazoan-dalana ary mikasa ny hanitatra ny tambajotra manerana izao tontolo izao. Ny fametahana sary dia iray amin'ireo lohahevitra tena tsy navela amin'izao andro izao, saingy ny fananana fahaiza-manao eo ambany fitaovam-pandrosoana dia hanome anao tombontsoa samihafa. Zava-dehibe ny misafidy ny karazana sary tsara mety hanampy amin'ny fitomboan'ny orinasa ary hanatsara ny fahombiazan'ny tranonkala iray. Eto izahay dia niresaka momba ireo sombina sasantsasany izay mety hahitana sary vongana lehibe:
Famoronana angona: -
Manampy sary vetivety ny sary Google sy Bing. Ankoatra izany, afaka mamorona mora kokoa ny mpanafody entana ary manao traikefa bebe kokoa noho ny mahafinaritra. Ankoatr'izay, ny fanangonana sary dia tsy mitaky anao hanana programa na fahaiza-manao koditra.
Fanetsenana Visual Taging:
Amin'ny sary voady, azonao atao ny manaisotra ny votoatim-pahalalahana mazava sy manandanja pejy maro amin'ny tranonkala. Ankoatra izany, manampy amin'ny fampihenana ny fepetra momba ny fanodinana azy ireo izy ary manome sary tsara tarehy ao anatin'ny minitra vitsy.
Mpandanja tsara kokoa:
Ny mpangalatra ordinatera sy ny angon-drakitra data dia tsy manoratra ny fitondran-tenan'ireo mpampiasa. Ny sary vongana kosa dia afaka manoratra ny fitondrantenan'ny mpampiasa amin'ny lafiny iray ary manampy anao hivezivezy amin'ny tranonkala.
Teknolojian'ny fianarana teknika:
Vitsy dia vitsy ny fanalana ny tranonkala sy ny fitaovam-pitrandrahana momba ny harena ankibon'ny tany izay manana teknolojia fianarana amin'ny fiasa. Ny mpangalatra sary dia manana an'io teknolojia io ary mahatsikaritra mora foana ny sary sy ny lahatsorany. Mampihena ny vidin'ny fikojakoana amin'ny 70% mahery izany ary manangona angon-drakitra avy amin'ny sary nalaina.
Image scraper mahatonga anao ho mora ny miditra amin'ny votoatin-tranonkala ary mikendry toerana maro. Ambonin'izany, tsy mila manana fahazoan-dàlana voafaritra ianao raha te hiditra amin'ny votoaty voaaro amin'ny tranokala iray. Azonao atao kosa ny miditra sy mamorona tranokala iray manontolo, anisan'izany ny lahatsoratra sy ny sary miaraka amin'ny sary vongana, tsy ilaina ny fampidiram-baovao.
Site Navigation intelligent:
Ity fitaovana ity dia afaka manala sary sy horonan-tsary ho anao, ary mamonjy ny fotoanao sy manatanteraka ny asa mora. Raha fintinina dia azonao antoka fa hahazo sary tsara tarehy ianao ary hahazo tahiry marina avy amin'ny tranonkala maro araka izay tianao.
Miaraka amin'ny sary madinika, azonao atao ny manakona ny votoatin'ny tranonkala, ny votoatin'ny tranonkala, ary ny lahatsoratra avy amin'ny tranonkala maro. Hamoaka ny tantara miaraka amin'ireo sary ary hamerina ny lohateniny ho anao.
Raha tsara vintana ianao, dia ho afaka hitady sary maimaim-poana ao amin'ny Google, Bing, Yahoo na ireo tahiry an-tserasera. Ny ampahany manan-danja indrindra dia ny ahafahanao mametaka ireo sary izay tadiavinao raha tsy mifanaraka amin'ny kalitaony. Sarotra loatra ny mahita ireo daty mifanaraka amin'izay ilaintsika rehetra. Soa ihany fa manamaivana ny asanao ny sary grifotra ary ny safidy teo aloha teo amin'ny orinasa sy ny marika ambony. Raha manaja ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona ianao dia hahazo tsara kokoa amin'ny fitaovana maoderina amin'ny sary ary miteraka fitarihana bebe kokoa amin'ny harato Source .